नेपालमा सुपरमार्केटमा चाहिने सिप कहाँ सिक्न पाइन्छ ?
Fri, Feb 21, 2020 | 17:40:12 NST
प्रश्न : म सुपरमार्केटमा काम गर्न कतार जाने तयारी गरिरहेको छु । नेपालमा सुपरमार्केटमा चाहिने सिप कहाँ सिक्न पाइन्छ ?
उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ -बिडम्बना ! नेपालमा सुपरमार्केटमा चाहिने सिप सिकाउने ठाँउ छैन । तपाईं आफैले काठमाडौंमा अबस्थित सुपरमार्केटमा नियमित गएर अबलोकन गर्दा राम्रो । विदेशमा जस्तो पूर्ण सुपरमार्केट नभए पनि तपाईंलाई काम गर्ने आइडिया हुन्छ ।